Sales Admin Staff | Pyei Sone Hein Group Of Company ﻿
13.10.2019, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
Company: Pyei Sone Hein Group Of Company
•	အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမှနျသူဖွဈပွီးTeam Workနှငျ့ပူးပေါငျးလုပျကိုငျနိုငျသူဖွဈရမညျ။
•	Any Graduate/ဘှဲ့ရဖွဈရမညျ။
•	Microsoft (Excel, Word, Power Point) Outlook(Email)
We offer • Female.
Work location No.29 Shwe Paduak Yeik Mon Bayint Naung Main Road, Kamaryut Township,Yangon.
Job posted: 13/10/2019
133 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	Purchasingပိုငျးလုပျကိုငျနိုငျသူဖွဈရမညျ။• •	Supplierမြားအားရှာဖှခြေိတျဆကျ၍Tenderလုပျငနျးအားအစအဆုံးပွီးမွောကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျရမညျ။
•	Sales Targetပွညျ့မီအောငျရောငျးနိုငျသူဖွဈပွီးလကျအောကျငယျသားမြားအားဦးဆောငျနိုငျသူဖွဈရမညျ။ •	Microsoft (Excel, Word, Power Point) Outlook(Email)
•	လလေ့ာသငျယူလိုစိတျရှိသူဖွဈရမညျ။ •	Microsoft (Excel, Word, Power Point) Outlook (Email)
158 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	နှစ်အလိုက်၊ လအလိုက်သတ်မှတ်ထားသောSales Target များကိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြည့်မှီအောင်စီမံခန့်ခွဲအောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	English4skill/Microsoft (Excel,Word, PoerPoint)/ Outlook (e-Mail) ရသူဖြစ်ရမည်။
•	English4Skill ရသူဖြစ်ရမည်။ •	Purchasing ပိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Supplier များအားရှာဖွေချိတ်ဆက်၍ Tender လုပ်ငန်းအားအစအဆုံးပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	Microsoft (Excel,Word,Power Point)/Outlook (email)
•	Digital ကတ္တားနှင့်ပတ်သက်၍Installation& Service ပိုင်းအား ကောင်းစွာနားလည်နိုင်သူဖြစ် ရမည်။ •	မိမိ၏ Team အားကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	B.Com ဘွဲ့ရ၊ CPA or ACCA Part II ပြီးထား သူဖြစ်ရမည်။ •	လက်အောက်ငယ်သားများအားစီစဉ်ကြီးကြပ် ညွှန်ကြားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Microsoft (Excel, Word, Power Point) Outlook (email)
213 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
•	စကားပြောသွက်လက်ချက်ချာပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	လိုအပ်လျှင် နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
•	ရိုးသား၊ကြိုးစားသူ စာရင်းအင်းစိတ်ဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်တက်သူဖြစ်ရမည်။
•	လိုအပ်လျှင် နယ်ရုံးခွဲများသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	စကားပြောသွက်လက်ချက်ချာပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
Sales Admin Staff Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Pyei Sone Hein Group Of Company Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Accounting/Audit/Tax Services Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Myanmar Qualified Lawyer – Disputes
HR Manager (or) Assistant HR Manager
Marketing Staff (Mhaw Bi)